Ma isweydiisay, maxaa isku beegay badashada kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga, iyo sharciga ka dhanka ah? | XORRIYA NEWS
Home Fikrado Ma isweydiisay, maxaa isku beegay badashada kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga, iyo sharciga...
Ma isweydiisay, maxaa isku beegay badashada kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga, iyo sharciga ka dhanka ah?
Cabdullaahi M. Cali, Cabdullaahi Heersare
Mahad iyo ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allaah, kana hufan xummaan iyo nusqaana oo dhan. Naxariis iyo nabadgalyo dushiisa ha ahaato Nabigeena Maxamed SCW iyo ehelkiisa. Waxaa Rabbi ka baryaa inuu qoraalkeyga iyo qoolkeyga ka ilaaliyo gaf iyo dambi, hadduu iga dhacana uu fadligiisa igu cafiyo.
Ma isweydiisay, maxaa isku beegay badashada kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga, iyo xeerka iyo sharciga ka dhanka ah?
Dhibaatooyinka iyo xasaradaha waa la sameeya si markuu dhibku iyo xamaasaddu taagan yihiin loo sameeyo xeerar, qawaaniin iyo sharciyo hoos galis ah oo aan ku dhisneyn xikmad, caqli iyo cilmi badan.
Dadku waxeey gaaraan markuu dhibku ku bato heer ay dhahaan xeer kasto iyo sharci kasto oo dhibka na haysto lagu joojin karo waa rabnaa, waa aqbalnay. Balse aysan isweydiin maxuu xeerka iyo sharciga khasaaro iyo faa’ido leeyahay, ma kud kaguur ee qanjo u guuraa, dhaawac ma ku yahay diinta, damiirka iyo dadnimada.
Basharka waxuu igu neceb yahay waa geerida laakiin markuu dhibka iyo rafaadka ka bato wuu jecleystaa geerida. Laakiin ma ogo in uu dhibka hadda haysto ka raaxeysan doono iyo in dhib ka la kulmi doono. Waxaa quman wax kasto la sameeynayo in la saaro miisaan sax ah iyo in lays barbar dhigo dheefta iyo dhibka ka dhalan karo.
Sharci kasto iyo xeer kasto uu aadanaha sameeysto waxaa loogu daneeya ama loogu darnaada qolo gaar ah, waxuu farxad iyo raali galiyaa koox, halka in kale oo badanna uu cari iyo ciil galiyo. Xeerkaan waxuu xasaasiyadda iyo xamaasadda ku kiciyey shacabka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, guddoomiyaha baaralaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh, guddoomiye kuxigeenka, Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey, xildhibaanada, iyo culumaa’udiinka.
Waxaa aaminsanahay ujeedka sharcigaan iyo xeerkaan inuu ahaa hoos galis maadaama waayadaan dambe la arkayey kiisas fool xun oo kufsi iyo xadgudubyo jinsiga ah. Iyo dhibka, xanuunka arrintaan oo dadka taabtay. Balse, waxaa jiro dad aan hoos galiska la marsiin karin iyo dad xaalad kasto ay ku sugan yihiin aqbaleynin arrin kasto oo lid ku ah diintooda iyo dhaqankooda.
Anigu, ma diidanin in la sameeyo sharci iyo xeer lagu ciqaabo shaqsiyaadka sameynayo ficilladaan waxuusnimada ah laakiin waxaa doonayaa sharci aan meel ku dhac ku aheyn diinteena suuuban, damiirkeena iyo dadnimadeena.
Waxaa arkay dad tiro yar oo ku doodayo dalka ma lahan sharci iyo xeer lagu xukumo qofkii geysto kufsi iyo xadgudub jinsiga ah. Jawaabta dadkaan waxeey tahay, waxaadan aqoon u laheyn meesha marjaca u ah sharci kasto iyo xeer kasto oo dadkaan iyo dalkaan lagu xukumo.
Waxaa soo jeedin iga ah, adeegsiga kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga loo badalo, Ka sineeysi xoog ah iyo qowmu luudnimo. Waxaa qirsanahay haddii sidaan la sameeyo in ciqaabka iyo xukunka lagu fulinaayo qofkii sameeyo ficilkaan cid kasto u cadahay.